Wonke umntu waseCanada uhlawula irhafu yokuthengisa; fumana yakho apha
KwiCanada, iintlawulo zentengiso zisetyenzisiwe ngeendlela ezintathu ezahlukeneyo: kwinqanaba lezemfundo ngokusebenzisa iRhafu-mali eneeMpahla kunye neNkonzo zeRhafu (GST); kwinqanaba lephondo, irhafu yephondo yokuthengisa (PST) ehlawulwa ngamaphondo, ngamanye amaxesha abizwa ngokuba yerhafu yokuthengisa; okanye i-value-added Intlawulo yokuThengiswa kweNtengiso (HST), inhlanganisela eyodwa ehlanganisiweyo ye-GST kunye ne-PST. I-HST iqokelelwa yi-Arhente yeRevenue Revenue Agency, leyo ibuyisela ixabiso elifanelekileyo kumaPhondo athatha inxaxheba.
Iirhafu ziyahluka kwiphondo kunye nommandla, njengoko kwenza iimpahla kunye neenkonzo apho irhafu isetyenzisiwe kunye neendlela ezisetyenziswa ngayo irhafu.
Kwiphondo ngalinye ngaphandle kwe-Alberta liye laphunyezwa kwiRhafu yeNtengiso yePhondo okanye iRhafu yokuThengiswa kweNtengiso. Ireyithi ye-GST yesigqeba ngu-5%, eyaqala ukusebenza ngoJanuwari 1, 2008.
Imimandla yase Yukon, i-Northwest Territories neNunavut ayinayo irhafu yentengiso, oku kuthetha kuphela i-GST eqokelelwa kwimimandla. Ezi zintathu zephondo ezikumntla zixhaswa kakhulu nguRhulumente waseburhulumenteni, kwaye abahlali babo bafumana ukuhlawulwa kweerhafu ezongezelelweyo ngenxa yeendleko eziphezulu zokuhlala ngasentla.
Ukufumana phi iNgcaciso epheleleyo ngakumbi
Ukufumana iinkcukacha ezingakumbi malunga nokuhlawula nokuqokelela iintlawulo zentengiso, qha ga mshelana neKhanada yeRhwebo yaseKhanada yaseKhanada.
Itheyibhile ingezantsi ifingqa iindleko zerhafu yokuthengisa nge-2017 kwiphondo nakwintsimi.
Ngama-2017 i-Canadian Sales Taxes ngePhondo kunye neSithili
KwiPhondo GST i-PST HST Ulwazi lweRhafu yePhondo
Alberta 5% n / A n / A Ulawulo lweRhafu neRhafu yeNkonzo
BC 5% 7% n / A Iintlawulo zabasebenzisi be-BC
Manitoba 5% 8% n / A I-Manitoba Intlawulo yokuThengiswa kweeNtengiso
New Brunswick n / A n / A 15% I-New Brunswick Imirhumo
Newfoundland n / A n / A 15% Imirhumo eNewfoundland naseLabrador
NWT 5% n / A n / A NWT Intlawulo
Nova Scotia n / A n / A 15% Iinkcukacha zeNowa Scotia abathengi
INunavut 5% n / A n / A Iintlawulo zeNunavut
PEI n / A n / A 15% I-PEI HST
Quebec 5% 9.975% n / A Quebec GST kunye neQST
WaseSaskatchewan 5% 6% n / A Isibonelelo soRhwebo lwePhondo leSaskatchewan
Yukon 5% n / A n / A I Yukon Taxation
Iingcebiso Zentlawulo Zentengiso kunye nokuhlaziywa
Yonke iCanada: Ireyithi yentlawulo ye-2017 kubo bonke abantu baseKhanadi bahlala befana no-2016.
Ukuhlaziywa kwe-PST: Ngo-Matshi 23, ngo-2017, i-PST yaseSaskatchewan iphakama ukusuka kwi-5% ukuya kwi-6%.
Ukuhlaziywa kwe-HST: Ukwanda kweHST okwakutshanje kwakuyi-1% yokunyuka kwe-Prince Edward Island ngo-Oktobha 1, 2016.
Ukuhlaziywa kwe-HST: Ngomhla ka-Julayi 1, 2016, izinga le-HST lenyuke ukusuka kuma-13% ukuya kwi-15% eNewfoundland naseLabrador naseNew Brunswick.
Ukulinganisa ukuThengiswa kweRhafu kuwo onke amaPhondo aseKhanada: Ngokuphathelele ukuthengiswa kweencwadi, kuphela i-GST kufuneka ithathelwe ingqalelo kulolu hlobo lokubala; irhafu yentengiso yephondo (PST) kufuneka ikhutshwe. Oku kuthethi, kwamanye amaphondo, i-Tax Harmonized Sales Tax (HST) kufuneka isetyenziswe.
Ukuxoshwa kwe-HST okanye ukubuyisana kwe-Ontario: Kukho ezinye izinto e-Ontario ezingafuneki iintlawulo zentengiso, ezifana nokutya okuyisiseko, ezinye iziyobisi, ukunakekelwa kwabantwana kunye nokunye. Iinkcukacha ziyafumaneka kwiwebsite ye-Ontario HST Exemptions.
Ukubalwa koRhafu oluHlangeneyo 2008-2010: Ukususela ngoJanuwari 2008 ukuya ku-Juni 30, 2010, amaphondo alandelayo athatha inqanaba le-HST eli-13%: i-New Brunswick, iNova Scotia, ne-Newfoundland neLabrador.
AbaThengi beeRhafu zeZentengiso
Ukuhambelana kwentela yokuthengisa i-GST / PST okanye i-HST 2017
I-calculator yerhafu yokuthengisa iHST GST
Ukuguqula i-calculator tax tax calculator iHST GST
I-calculator yerhafu yokuthengisa i-GST QST
Ukuguqula i-calculator tax taxator GST QST
I-calculator yerhafu yokuthengisa I-British Columbia GST / PST
Intlawulo yerhafu yokuthengisa ye-Ontario
Iingcebiso / ii-calculator zemali zaseKhanada
Ipalamente yaseKhanada yeZakhiwo zomlilo we-1916
I-Tortoise ne-Turtle Magic kunye neNkcubeko
'I-EU' ibhengezwa njani ngesiFrentshi?
Fumana uYobhi kwiziko loLuhlu lokuTlola